လကျမထပျသေးခငျ FB မှာ ခဈြသူနဲ့နှဈယောကျတှဲပုံ တငျခွငျးက ဓားသှားထကျမှာ လမျးလြှောကျနရေတာနဲ့ တူတယျညီမငယျ
HomeKnowledgeလကျမထပျသေးခငျ FB မှာ ခဈြသူနဲ့နှဈယောကျတှဲပုံ တငျခွငျးက ဓားသှားထကျမှာ လမျးလြှောကျနရေတာနဲ့ တူတယျညီမငယျ
လကျမထပျဘဲနဲ့ Fb မှာ ကိုယျ့ခဈြသူပုံနဲ့ နဈယောကျအတူ တှဲတငျခွငျးက ဓားသှားထကျမှာ လမျးလြှောကျနရေတာနဲ့ တူတယျ ညီမငယျ။ တကယျလို့သာ ကံကွမ်မာက လှညျ့စားသှားခဲ့ရငျ ပထမဆုံး ထိရှမှာက ဘယျသူလို့ ထငျလဲ..? ကိုယျ့ နှလုံးသားတှေ မဟုတျဘူး.. မာနနဲ့ သိက်ခာတှပေါ ညီမငယျ။
နှလုံးသားတှေ နာမကနျြးဖွဈတာက တိတျတဆိတျလေး ငိုကွှေးလို့ ရတယျ။ ဂုဏျသိက်ခာတှေ နာမကနျြးဖွဈရငျ ပတျဝနျးကငျြရဲ့ တံတှေးခှကျမှာ ပကျလကျမြောနရေမှာက ညီမငယျရဲ့ မိသားစုပါ။ ခဈြတာကို လကျခံပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ နားလညျမှု ဆိုတဲ့ အလှာလေးတဈခု ခွားရုံနဲ့ လမျးခှဲသှားတဲ့ သူတှကေ မကျြစီရှေ့ မှာတငျ တဈပုံကွီးပါ ညီမငယျ။
အထူးသဖွငျ့ ဆယျကြျောသကျရှယျ ညီမလေးမြားကို ပိုပွီး သတိပေးခငျြတာပါ။ ခဈြတတျစမှာ ရှနေ့ောကျ မမွငျပဲ အပြျောလှနျးပွီး နဈယောကျပုံတှေ လကျမထပျသေးခငျ တငျလရှေိ့ကွတဲ့ ခဈြသူ နဈယောကျ သဟဇာတဖွဈလို့ ဆငျမပွေ ဖွဈကွတဲ့အခါ ပထမဉီးဆုံး နဈနာမှာက မိနျးကလေးတှသော ဖွဈပွီး နောကျတဈယောကျနဲ့ ခဈြတဲ့အခါ အခဈြစဈနဲ့ တှတေဲ့အခါ အတိတျက ကိုယျပွုခဲ့တဲ့ လုပျရပျတှကေ အရိပျမဲကွီး အဖွဈနဲ့ ရှိနတေော့မှာပါ။
ခဈြတာကို လကျခံလို့ ရပါတယျ။ ဒါပမေဲ့ လကျမထပျ ရသေးခငျ အထိတော့ နဈယောကျပုံတှကေို Fb လို့ ချေါတဲ့ ကယျြပွနျ့လှတဲ့ လူမှုကှနျယကျပျေါမှာ မတငျစေ ခငျြလို့ပါ ညီမငယျ။ လကျထပျပွီးသှားရငျ တငျပါ။ ပွုံးနတေဲ့ ဘဝလေးတှကေို အားကရြငျး like တှေ ment တှေ တဈဝကွီး အားရပါးရ ပေးနမေယျ။
တကယျတော့ fb မှာ နဈယောကျ တှဲတငျမှ အခဈြစဈ ဖွဈလာတာ မဟုတျပါဘူး။ ဒါတှဟော ဘိုးဘှားလကျထကျမှာ မရှိခဲ့လို့ ညီမတို့ လူ ဖွဈလာတာပါ။ စဉျစားတှေးချေါတတျမှ ဘဝက အဓိပ်ပါယျ ရှိသလို ထိနျးသိနျးသငျ့တာကို ထိနျးသိနျးမှ အဲ့ဒီဘဝက ပိုပွီး တနျဖိုး ရှိတာပါ။
ခဈြသူက နဈယောကျပုံ တှကေို fb မှာ တငျမှ ခဈြမယျဆိုရငျ ရဲရဲကွီးသာ လမျးခှဲလိုကျပါ။ သူ့ရဲ့ အခဈြက နညျးနညျး ရူးမိုကျနလေို့ပဲ။ အခဈြစိတျက နလုံးသားထဲမှာပဲ ရှိပါတယျ။ သစ်စာတရားက အသိညဏျမှာ ခိုဝငျပါတယျ။ fb မှာ ရှိနတော မဟုတျပါဘူး။ လှတျလပျစှာ ကှဲလှဲခှငျ့ ရှိပါတယျ။
ဒါပမေဲ့ ကိုယျ့ဘဝအတှကျ ဘယျဟာက အဓိကလညျး ဆိုတာ စဉျးစားတှေးချေါတတျပါစေ ညီမငယျ။ fb သုံးနတေဲ့ ညီမငယျမြား အမှနျတရားကို ထှေးပိုကျရငျး အနာဂတျမှာ ကမ်ဘာကို ကိုငျလှုပျနိငျမဲ့ မိခငျလောငျးမြား ဖွဈကွပါစေ..
လက်မထပ်သေးခင် FB မှာ ချစ်သူနဲ့နှစ်ယောက်တွဲပုံ တင်ခြင်းက ဓားသွားထက်မှာ လမ်းလျှောက်နေရတာနဲ့ တူတယ်ညီမငယ်
လက်မထပ်ဘဲနဲ့ Fb မှာ ကိုယ့်ချစ်သူပုံနဲ့ နစ်ယောက်အတူ တွဲတင်ခြင်းက ဓားသွားထက်မှာ လမ်းလျှောက်နေရတာနဲ့ တူတယ် ညီမငယ်။ တကယ်လို့သာ ကံကြမ္မာက လှည့်စားသွားခဲ့ရင် ပထမဆုံး ထိရှမှာက ဘယ်သူလို့ ထင်လဲ..? ကိုယ့်နှလုံးသားတွေ မဟုတ်ဘူး.. မာနနဲ့ သိက္ခာတွေပါ ညီမငယ်။
နှလုံးသားတွေ နာမကျန်းဖြစ်တာက တိတ်တဆိတ်လေး ငိုကြွေးလို့ ရတယ်။ ဂုဏ်သိက္ခာတွေ နာမကျန်းဖြစ်ရင် ပတ်ဝန်းကျင်ရဲ့ တံတွေးခွက်မှာ ပက်လက်မျောနေရမှာက ညီမငယ်ရဲ့ မိသားစုပါ။ ချစ်တာကို လက်ခံပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ နားလည်မှု ဆိုတဲ့ အလွှာလေးတစ်ခု ခြားရုံနဲ့ လမ်းခွဲသွားတဲ့ သူတွေက မျက်စီရှေ့ မှာတင် တစ်ပုံကြီးပါ ညီမငယ်။
အထူးသဖြင့် ဆယ်ကျော်သက်ရွယ် ညီမလေးများကို ပိုပြီး သတိပေးချင်တာပါ။ ချစ်တတ်စမှာ ရှေ့နောက် မမြင်ပဲ အပျော်လွန်းပြီး နစ်ယောက်ပုံတွေ လက်မထပ်သေးခင် တင်လေ့ရှိကြတဲ့ ချစ်သူ နစ်ယောက် သဟဇာတဖြစ်လို့ ဆင်မပြေ ဖြစ်ကြတဲ့အခါ ပထမဉီးဆုံး နစ်နာမှာက မိန်းကလေးတွေသာ ဖြစ်ပြီး နောက်တစ်ယောက်နဲ့ ချစ်တဲ့အခါ အချစ်စစ်နဲ့ တွေ့တဲ့အခါ အတိတ်က ကိုယ်ပြုခဲ့တဲ့ လုပ်ရပ်တွေက အရိပ်မဲကြီး အဖြစ်နဲ့ ရှိနေတော့မှာပါ။
ချစ်တာကို လက်ခံလို့ ရပါတယ်။ ဒါပေမဲ့ လက်မထပ် ရသေးခင် အထိတော့ နစ်ယောက်ပုံတွေကို Fb လို့ ခေါ်တဲ့ ကျယ်ပြန့်လှတဲ့ လူမှုကွန်ယက်ပေါ်မှာ မတင်စေ ချင်လို့ပါ ညီမငယ်။ လက်ထပ်ပြီးသွားရင် တင်ပါ။ ပြုံးနေတဲ့ ဘဝလေးတွေကို အားကျရင်း like တွေ ment တွေ တစ်ဝကြီး အားရပါးရ ပေးနေမယ်။
တကယ်တော့ fb မှာ နစ်ယောက် တွဲတင်မှ အချစ်စစ် ဖြစ်လာတာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒါတွေဟာ ဘိုးဘွားလက်ထက်မှာ မရှိခဲ့လို့ ညီမတို့ လူ ဖြစ်လာတာပါ။ စဉ်စားတွေးခေါ်တတ်မှ ဘဝက အဓိပ္ပါယ် ရှိသလို ထိန်းသိန်းသင့်တာကို ထိန်းသိန်းမှ အဲ့ဒီဘဝက ပိုပြီး တန်ဖိုး ရှိတာပါ။
ချစ်သူက နစ်ယောက်ပုံ တွေကို fb မှာ တင်မှ ချစ်မယ်ဆိုရင် ရဲရဲကြီးသာ လမ်းခွဲလိုက်ပါ။ သူ့ရဲ့ အချစ်က နည်းနည်း ရူးမိုက်နေလို့ပဲ။ အချစ်စိတ်က နလုံးသားထဲမှာပဲ ရှိပါတယ်။ သစ္စာတရားက အသိညဏ်မှာ ခိုဝင်ပါတယ်။ fb မှာ ရှိနေတာ မဟုတ်ပါဘူး။ လွတ်လပ်စွာ ကွဲလွဲခွင့် ရှိပါတယ်။
ဒါပေမဲ့ ကိုယ့်ဘဝအတွက် ဘယ်ဟာက အဓိကလည်း ဆိုတာ စဉ်းစားတွေးခေါ်တတ်ပါစေ ညီမငယ်။ fb သုံးနေတဲ့ ညီမငယ်များ အမှန်တရားကို ထွေးပိုက်ရင်း အနာဂတ်မှာ ကမ္ဘာကို ကိုင်လှုပ်နိင်မဲ့ မိခင်လောင်းများ ဖြစ်ကြပါစေ..